အစိမ်းရောင်လွင်ပြင်: ပုဇွန်ကြက်သွန်ဖြူပေါင်း၊ ပဲပင်ပေါက်ချဉ်စပ်သုပ်
အဲ ကျက်ပါပြီတဲ့ ဒီလိုဆိုရင် ပုဇွန်ကြက်သွန်ဖြူပေါင်းလေး စားလို့ရပါပြီနော်။ အချဉ်အရသာနဲ့ စားချင်ရင်တော့ သံပုရာသီးလေး ညှစ်ပြီး စားလို့ရပါတယ်.. အချိုပေါင်းသက်သက် စားချင်သူများကတော့ ဒီတိုင်းလေး ကြက်သွန်ဖြူနံ့ မွှေးနေပြီး၊ အစပ်အရသာပါတဲ့ ပုဇွန်ကြက်သွန်ဖြူပေါင်းကို သုံးဆောင်နိုင်ပါပြီရှင်။
ပေါင်းပြီးချိန်မှာ နံနံရွက်လေးတွေက အစိမ်းရောင် သိပ်မပေါ်တော့တာကြောင့် နံနံနဲ့ ငရုပ်သီးကို ခုလို အပေါ်က ပြန်ဖြူးလိုက်ပြီး အရောင်လေးပေါ်လာအောင် ပြင်လိုက်ပါတယ်။
ပုဇွန်ကို ဆီပြန်ချက်စားရတာ အီလာပြီ ဆိုသူများ ခုလို ကြက်သွန်ဖြူလေး၊ ငရုပ်သီးလေးနဲ့ ဆီမပါသလောက် ပေါင်းထားတဲ့ ပုဇွန်ကို စားနိုင်ပါတယ်နော်။ ပေါင်းပြီးချိန်မှာ ပုဇွန်ထဲက ရေများထွက်လာတာကြောင့် ခုလိုရေတွေနဲ့ ဖြစ်နေတတ်ပါတယ်.. ဒါကြောင့် စပြီးပေါင်းချိန်မှာ ရေထည့်ဖို့ မလိုပါဘူးနော်။ ဆီလဲပါဝင်မှုနည်းပြီး ကျန်းမာရေးအတွက် အကျိုးရှိတဲ့ ကြက်သွန်ဖြူကြောင့် အားလုံးနဲ့ သင့်တော်မဲ့ ဟင်းတစ်ခွက်ဖြစ်ပါတယ်ရှင်။
တကယ့်ကို လွယ်လွယ်ကူကူ ဟင်းတစ်ခွက်ပါ။ စားဖူးသူ များလိမ့်မယ် ထင်ပါတယ်နော်။ ပဲပင်ပေါက်ကို ရေနွေးဆူဆူထဲ ချက်ခြင်းထည့်ပြီး ချက်ခြင်းပြန်ဆယ်ပါတယ်။ ရေနွေးဖျောရုံလောက်ဆို အိုကေပါတယ်.. ပျော့သွားမှာ စိုးလို့ပါ။ နောက် ရေအေးနဲ့ စိမ်ထားလိုက်ပြီး ရေညှစ်ကာ ရေစစ်ထားလိုက်ပါတယ်။
ရေနွေးဖျောထားပြီး ပဲပင်ပေါက်တွေကို ဓားနဲ့ အနည်းငယ် ဖြတ်ကာ၊ ခရမ်းချဉ်သီး၊ ငရုပ်သီး(အစပ်ကြိုက်သူများ များများထည့်ရန်) ၊ ကြက်သွန်နီ၊ နံနံ၊ ဆား၊ အချိုမှုန့်၊ ပုဇွန်ခြောက်တို့ကို ထည့်ကာ အဆင်သင့် သုပ်ဖို့ပြင်ဆင်ထားပါတယ်..
စားခါနီးမှ သံပုရာသီးလေး ညှစ်ပြီး နယ်လိုက်ရင် ချဉ်ချဉ်စပ်စပ် ပဲပင်ပေါက်သုပ်ရပါပြီ။ ပဲပင်ပေါက်ကို အချဉ်တည်ဖို့ အချိန်စောင့်စရာမလိုဘဲ အမြန်ဆုံး စားနိုင်တဲ့ လွယ်ကူမြန်ဆန် ထမင်းမြိန်တဲ့ ဟင်းရံတစ်ပွဲ ဖြစ်ပါတယ်..
ချက်မိချက်ရာ ချက်လိုက်မိတဲ့ ပုဇွန်ကြက်သွန်ဖြူပေါင်းနဲ့ ပဲပင်ပေါက်ချဉ်စပ်သုပ်ကတော့ မိတ်ဆွေများအတွက် ဒီတစ်ပတ် Weekend Special ဟင်းလျာများ ဖြစ်ပါတယ်.. Weekend Special ကို စောင့်နေပါတယ်ဆိုတဲ့ သူလေးလဲ ကျေနပ်နိုင်ပါစေနော်။ မိတ်ဆွေများ အားလုံးလဲ ချက်ရေးပြုတ်ရေးမှာ အဆင်ပြေချောမွေ့စွာ လျှာရင်းမြက်တဲ့ ဟင်းခွက်များ ချက်ပြုတ်နိုင်ကြပါစေရှင်။
23 Responses to “ပုဇွန်ကြက်သွန်ဖြူပေါင်း၊ ပဲပင်ပေါက်ချဉ်စပ်သုပ်”
February 26, 2011 at 5:56 PM
အစ်မချော... ရို့စ်လည်း ပုဇွန် ကြိုက်တယ်။ ဒီမှာတော့ ဇပွန်က အရမ်း ဈေးကြီးတယ် (ပြောချင်ဇောနဲ့ ချကားတွေတောင် အပီတော့ဝူးး)။ အစ်မချောရဲ့ ပုဇွန် ကြက်သွန်ဖြူပေါင်းလေးပဲ စားသွားတယ်နော်။ ကောင်းမှကောင်း။ ဓာတ်ပုံလေးတွေ ရိုက်ထားတာလည်း လှမှလှး)
မချောကို အမတော်မယ်.. ဟဲဟဲ.. ဟင်းချက်ကျွေးအောင်လို့. .အဟိ.. စားချင်စိတ်တွေ တဖွားဖွားပေါ်လာပြီ..
မချောရေ .. ကြိုက်တယ် ပဲပင်ပေါက်ကိုလည်းကြိုက်တယ်၊ မချောလိုသုတ်မစားဖူးသေးဘူး၊ ပုဇွန်ဟင်းလည်းကြိုက်တယ်၊ တော်လိုက်တာ နာမည်ကြားတာနဲ့ ကို ရှလွတ် ရှလွတ်ဖြစ်နေတာ၊
သံပုရာသီးလေးညှစ်၊ အချဉ်အရသာလေးနဲ့ဆို စားကောင်းလိုက်မယ့်ဖြစ်ခြင်း၊ ဒီတစ်ပတ် weekend special လေးကို သိပ်ကြိုက်သွားပါပြီ၊ မြန်လဲမြန် ကျန်းမာရေးနဲ့လည်းညီညွတ်တယ်၊
ဟင်းချက်နည်းမှတ်ထားဦးမယ်၊ ပဲပင်ပေါက် တရုတ်ဈေးမှာ သွားရှာမယ်၊ တခါတလေတွေ့တတ်တယ်၊
ပုဇွန်က ဟုတ်တယ် ဈေးကြီးတယ်၊
ချစ်ဖို့သိပ်ကောင်းတဲ့ မချော ပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့ပါစေ
ပုဇွန်ဟင်းက အဆန်းလေးပဲ ချောရေ။ အဲလိုမျိုးတစ်ခါမှ မပေါင်းဖူးဘူး။ လုပ်စားကြည့်ရဦးမယ်။ ပဲပင်ပေါက်ချဉ်စပ်သုပ်ကတော့ အိမ်ကအကြိုက်ဆုံးဟင်းရံတစ်ခွက်ထဲမှာ ပါတယ် :-)
သမားရိုးကျ ဟင်းတွေကို ငြီးငွေ့နေတာနဲ့ အတော်ပဲ။
ချောဘလော့ကိုလာရင် ဟင်းဆန်းဆန်းလေးတွေ တွေ့ရတယ်။ အဲဒီလို ဟင်းမျိုးတွေ လုပ်စားချင်ပေမဲ့ ဦးရီးတော် လူပျိုကြီးမှာ ထုံးစံမပျက်သော သမားရိုးကျ ဟင်းခွက်များပဲ စားလိုတာမို့ အခက်တွေ့နေပါတယ်။
READY MAKE အသားပေါင်းထုပ်တွေ ပေါက်စီ တွေပဲ ပေါင်းစားဖြစ်တယ်..
ခုလိုမျိုးလေး မြင်ရတော့လဲ ..
ဒေါ်ချော မီးဖိုထဲက ၂ ကောင်လောက် နှိုက်ပြီး
ဟင်းလေးတွေကဆန်းပြီးလုပ်ရတာလည်းလွယ်တယ်။ လိုက်လုပ်စားဦးမယ်။ အခုတော့ ပဲပင်ပေါက်က ၀ယ်ရဦးမှာမို့ ပုစွန်ပဲအရင်သုပ်စားလိုက်တယ် :)
နံနံပင်က နောက်မှထည့်ရင် မကောင်းဘူးလားအစ်မ... ပုဇွန်ပေါင်းအတွက် အနံ့ အရသာ ပြောင်းသွားမလား...
အားတဲ့ခါတော့ စမ်းကြည့်မယ်စိတ်ကူးတယ်... အဟီး ပျင်းတော့ပျင်းတယ်ဗျာ....
မချောက ရှင်းပြထားတော့လည်း တကယ့်ကို ရိုးရိုးလေး ပဲ၊ ပြီးတော့ အင်မတန်လည်း အရသာ ရှိမယ့်ပုံ...၊
တကယ်ကြီးကို ဗိုက်ဆာပြီး ပြန်သွားပြီ..။
ဟုတ်ပ ကိုအလင်းစက်ပြောသလို လုပ်ရမှာ
နံနံတွေက နွမ်းသွားပြီး မလှတော့ဘူးဖြစ်သွားတယ် အဲ စားလို့တော့ ကောင်းတယ် အရသာအတော်ရှိ
နောက်တခေါက်ပေါ့ ခုထက်ကောင်းအောင် လုပ်စားဦးမယ် ဟီး
ပုဇွန်ကြက်သွန်ဖြူပေါင်းနဲ့ ပဲပင်ပေါက်ချဉ်စပ်သုပ်လေး လာစားတယ် မချောရေ။ အချဉ်အစပ်ဆို ကြိုက်ပြီးသားပဲ။
လက်ရာ ကောင်းကောင်းလေးမို့ ကြည့်ရုံနဲ့ သွားရည်ကျချင်နေပြီ။ အမချော နှိပ်စက်တယ်။း(
ပဲပင်ပေါက် ကုိုအမြဲမကြိုက်ဘူး။ ဒါပေမဲ့ ပဲပင်ပေါက်သုပ်ကျတော့ သိပ်ကြိုက်တယ်။
ချောရေ..စိတ်ရှည်ရှည်နဲ့ သေသေချာချာ ရေးပြထားလို့ ကျေးဇူးဘဲနော်။
မမချောရေ.. ပုစွန်ကြက်သွန်ဖြူပေါင်းလေးအတွက် ကျေးဇူးနော်.. ဟင်းတွေ စားရတာ ထပ်နေလို့ ဘာစားရမလဲ စဉ်းစားနေတာနဲ့ အတော်ပဲ.. ပဲပင်ပေါက်သုပ်ကောပေါ့.. :)
အမကတော့ အစားနဲ့ နှိပ်စက်နေပါတယ် :P
ပုံတွေက လှလွန်းလို့ ကြည့်ရင်းသွားရေကျမိတယ်..
အား... မချော နှိပ်စက်ပြီ ဗိုက်ဆာနေတဲ့ အချိန်မှာ အကြိုက်ဆုံး အနေဝေး အစားအသောက်တွေ လာပြထားတယ် ရက်စက်ပါ့ မကြီးချောရေ....
I tried to cook the prawns and mushroom curry.It is very delicious.